Profaịlụ LinkedIn na ojiji | Martech Zone
Profaịlụ LinkedIn na ojiji
Sunday, July 10, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Site na itinye onye ọrụ ọhụụ na nke abụọ ọ bụla, uru LinkedIn na-eto maka nyocha mmadụ metụtara azụmahịa. Ikekwe otu n'ime ọnụ ọgụgụ na-adọrọ mmasị karị bụ na 40% nke 500 e nyochara kwuru na ha adịkarịghị pịa mgbasa ozi LinkedIn ebe 60% nke ndị ọrụ niile kwuru na ha nwere ma ọlị. Site na ndị ọrụ 100 nde na-eto eto, enwere ike ị nweta ụfọdụ uru maka ụfọdụ ụlọ ọrụ itinye ego na mgbasa ozi LinkedIn - Achọrọ m ịma ihe ahụmịhe gị.
Ọnye na-bụ Lab42?
Dị ka Lab42 website: Lab42 bụ mfe ụzọ ime n'ji ahịa nnyocha online iji netwọk mmekọrịta. Ma ị mepụtara nyocha ịntanetị na ngwa ọrụ okike nyocha anyị ma ọ bụ na anyị mere, Lab42 chọtara ndị zaghachiri maka nyocha gị ma nyefee nsonaazụ na ụbọchị 3 ruo 5. Anyị na-eme ihe a niile maka $ 500 na $ 1,000. Nke ahụ ziri ezi - $ 500.
N'uche nke m, ọ nweghị nnukwu ihe ịtụnanya sitere na nyocha a na infographic si Lab42. Agbanyeghị, ị nwere ike ịchọrọ itinye netwọkụ n'uche nke ọma oge ọzọ ịchọrọ ịnwale ụfọdụ mgbasa ozi akwụ ụgwọ.
Douglas Karr Sunday, July 10, 2011 Wednesday, October 26, 2011
WOT bụ aha gị?
Ndị na-ede ụlọ na B2B Tweeting
Jul 10, 2011 na 4:01 PM
Hụrụ ya n'anya! Nke a na-eme ka okwukwe m sie ike na ọtụtụ mmadụ na-eji LinkedIn eme ihe mgbe niile karịa ka anyị nwere ike iche. Echere m na ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-azụ ahịa dịka LinkedIn karịa netwọkụ ndị ọzọ n'ihi na ọ nweghị “junk” na nkata niile netwọkụ nwere. LinkedIn na-aga n'ihu na-abụ ọkacha mmasị m na netwọk mmekọrịta network